“Wax layaab ah ma’ahan bandhigyada uu sameynayo Lionel Messi” – Gool FM
“Wax layaab ah ma’ahan bandhigyada uu sameynayo Lionel Messi”
(Barcelona) 31 Maarso 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Barcelona, Sergio Busquets ayaan la yaabanayn bandhiggii ugu dambeeyey ee Lionel Messi uu sameeyay kaddib markii xiddiga reer Argentina uu labo gool dhaliyey kulankii darbiga ahaa oo ay 2-0 uga adkaadeen xalay naadiga Espanyol.
Busquets ayaa sheegay inuusan layaabanayn bandhigyada cajiibka ah ee uu sameynayo Lionel Messi, maxaa yeelay waxa uu ku sameeyaa tababarka.
Messi ayaa ilaaliyey in kooxdiisa ay hoggaanka u hayso horyaalka La Liga, waxaana uu dhaliyey 40 gool tartammada oo dhan 10 xilli ciyaareed oo xiriir ah.
Isagoo la hadlayey warbaahinta Spain, Busquets ayaa yiri: “Bandhigyadiisa Messi iyo qaab ciyaareedkiisa waa mid aan caadi ahayn, laakiin lama yaabanin.”
“Waxa uu tababarka ku sameeyo waa mid aad u dhib badan in lagu sameeyo kulamada gudahooda, laakiin waa uu isticmaalayaa isaga layaabna malahan.” ayuu hadalkiisa ku daray Busquets.
Dhinaca kale tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa kaddib kulankii xalay si weyn u ammaanay Lionel Messi waxaana uu sheegay in haddii aad haysato Leo aad og tahay in guushu ay soo socoto.
Afar ka mid ah xiddigaha kooxda Heegan oo looga yeeray xulka qaranka Soomaaliya… + SAWIRRO